DAAWO: Xil. M. Abdi Yusuf ” Saacid Farax iyo Xasan Shiikh midna ma leh aqoon dowladeed, xitaa maalin uma shaqeyn dowlad hadda ka hor” |
DAAWO: Xil. M. Abdi Yusuf ” Saacid Farax iyo Xasan Shiikh midna ma leh aqoon dowladeed, xitaa maalin uma shaqeyn dowlad hadda ka hor”
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna hadda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn u weeraray hoggaanka madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud iyo Ra’iisul wasaare Saacid Farax Garaad. Waxaana uu sheegay inay jabiyeen nidaamkii lagu doortay.
Xildhibaan Maxamed Abdi Yusuf oo la hadlayey soomaalida degan wadanka Holland ayaa waxaa uu sheegay in xukuumada hadda jirta wax badan oo howlihii loo xilsaaray qaban la’dahay, isagoona madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ku eedeeyey inaysan shaqadooda kala saarin oo ay isku milmeen xilalka ay dalka u kala hayaan.
HALKAN KA DAAWO HADALKA MAXAMED ABDI YUSUF.
Waxaana uu si gaar ah Ra’iisul wasaare Saacid Farax Garaad ugu eedeeyey inuu xilkii xukuumada gaabis ka yahay, balse taasi badelkeeda uu howsha iska wato Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud. Isagoo arrintaasi ka hadlaya ayuu waxaa uu sheegay in xildhibaanada ay mooshin arrintaasi ku saabsan ka keeni doonaan.
” Saacid hal maalin dowlad uma shaqeyn, Xasan Shiikh isagana waa la mid ah oo walikiis dowlad shaqaale uma noqon, wasiirada iyo qaar xildhibaanada ka mid ah waa la qabaan aqoon la’aantaasi dowladnimo. Waxaa dhibka ugu badan yahay xukuumadii aan kalsoonida kusiinay ammaanka, waxbarashada, dhaqaalaha, arrimaha dibada iyo wixii xukuumad looga fadhiyey ma wadato howsheeda, waxaa shaqadii Saacid Farax iska wata Madaxweyne Xasan Shiikh. Waxanse idin sheegayaa waa astaan muujineysa heerka ay aqoonta dowladnimo ka joogaan” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Abdi Yusuf waxaana uu intaasi kusii daray :
” Guddoomiye Jawaari ayaa arrintaasi waxa uu ka qoray warbixin isagoo u qoray Madaxweynaha, waxaana uu ka codsaday in howsha xukuumada looga danbeeyo Saacid iyo wasiiradiisa. Waxaan sugeynaa waa in isbadelkaasi yimaado, haddii kale baarlamaanka ayaan uga hadli doonaa arrintaasi.”
Dhinaca kale waxaa uu Xildhibaan Maxamed Abdi Yusuf kulankan uga hadlay maamul u sameynta Jubbaland isagoona sheegay in maamulkaasi uu ku socdo wado la jaanqaadeysa dastuurka dalka u degsan ee federaalka ah, laakiin waxaa uu dhaliil xoogan huwiyey qaabka ay uga hadlaan maamulkaasi madaxweyne Xasan Shiikh iyo ra’iisul wasaare Saacid Farax Garaad.
” Awood aysan laheyn ayey sheeganayaan Saacid iyo Xasan waxaana taasi u aragnaa inay yihiin madax jabineysa sharciga lagu hishiiyey ee ah federaalka. Dadka degan sadexdaasi gobol ayaa xaq u leh inay dhistaan wixii ay rabaan. Laba sano ayey howshan soo socotay. Waxaana wada waday dowladii midan ka horeysay iyo urur goboleedka IGAD iyo beesha caalamka. Dowlada haddii ay la shaqeyn weysana maamulkaasi waa dhismi doonaa, waxaana uu noqon doonaa mucaarad ka hor yimaada dowladan, mana ahan mid u wanaagsan Saacid iyo Xasan Shiikh” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Abdi Yusuf.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna xildhibaan Maxamed Abdi Yusuf ayaa waxaa uu si weyn uga horyimid qodobadii kasoo baxay shirkii Ankara, waxaana uu sheegay inuu madaxweyne Xasan Shiikh uu sameeyey qiyaano qaran, maadaama buu yiri uu la fariirstay maamul sheeganaya Jamhuuriyad ka madaxbanaan Soomaaliya.
” Waa danbi in dad sheeganaya Jamhuuriyad ka madaxbanaan Soomaaliya oo la yiraahdo Somaliland lala fariisto. Waxaan aniga maamulkaasi u aqaan gobolada waqooyi ee Soomaaliya. Raga maamulkaasi watana waa hal beel oo ka mid ah shanta beelood ee degan gobolkaasi. Dastuurka ayeyna baalmarsan yihiin wixii kasoo baxay shirarkaasi.”
Dhinaca kale Maxamed Abdi Yusuf waxaa uu dhaliilay qaabka hub loogu aamini karo ciidamada Muqdisho fadhiya oo uu ku sheegay inay yihiin ciidamo beeleedyo aan QARAN mateli karin, isagoona sheegay in si midaasi la mid ah kuwa gobollada kale iyagana qabiilo ku dhisan yihiin.
‘ Ciidamada Xamar jooga ma ahan ciidan qaran ee waa ciidan beeleed, waliba hadda lugaha lagalay ciidamo jufeed. Ma jiraan midnimo ka dhexeysa, midkasta kan kale ayuu iska ilaalinayaa, waxaana madax u ah sarkaal ku beel ah. Marka ciidamo sidaasi ah hubkii loo dhiibo waxaa laga dhexli doonaa inay isku baabi’iyeen. Gobollada kalana waa la wadaagaan dhibkan” ayuu yiri xildhibaanka.
Hadalka xildhibaan Maxamed Abdi Yusuf ayaa imaanaya xilli xukuumadda hadda jirta iyo madaxweyne Xasan shiikh ay la daalaa dhacayaan khilaafaadyo uga imaanaya shacabka, kadib markii ay sameeyeen maamulo aan rabitaanka dadka ku imaan iyo jabinta qaarka mid ah dastuurka federaalka ah, sida maamul goboleedyo inay dadka dhistaan.